Stylish ကျတဲ့ Social sharing widget ပါ ~ Tech in Blogging
Smadav 2013 Rev.9.3
WinRAR 5(Beta 4)
Zip Password Tool 2.3
Hide IP Easy 5.1.6.6
Image Converter v.1.3
jQuery Exit Pop-up Facebook Like Box
ဆိုဒ်အတွက် Color Codes
Stylish Social Sharing Widget
အပန်းရောင် Up+Down button
အပြာရောင် Sharing widget
ဘလော့ပိုစ့်များရဲ့ အောက်မှာ Page Number တွေထားမယ်
Colorful Social sharing widget
Stylish ကျတဲ့ Social sharing widget ပါ
21:27 Pyae Phyo 1 comment
မင်္ဂလာပါ။ ခု Blogger widget တစ်ခု Tech in Blogging မှ share မှာဖြစ်ပါတယ်။ Social Sharing widget တစ်ခုပါ။ အရမ်း Style ကျတဲ့ widget လေးပါ။ သင့်ရဲ့ Blog site မှာထားရင် အရမ်းလှပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေကိုလည်း share ရလွယ်ကူစေပါတယ်။
အောက်ပါပုံလေးပါ သင့် Widget ကိုလှပသွားစေမှာပါ။ ဒါကသင့်ရဲ့ဘလော့တစ်ခုတိုင်းမှာ ပါတယ်။ auto ပါ။
ခု Add to Blogger ကို အရင် ကလစ်ပါ။ Add Page Element ဆိုပြီး page ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Add Widget ကို ကလစ်ပါ။
I am YGNBlogger and the founder of Tech in Blogging. I am 9th grade student. I'm now 15 years old. I like blogging and writing posts. Through these, my hobbies are swimming and playing games. I am also interested in driving cars.
Posted in: Blogger Widgets, Social Widgets
Tech in Blogging မှတင်သမျှပိုစ့်များကို ယခုချက်ချင်းရယူပါ
သင်တို့လည်း ကျွန်တော်တို့ဘလော့မှ ဝေမျှနေသော Blog နည်းပညာများကို အခမဲ့ယူလိုက်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း သင့်ရဲ့ gmail အကောင့်အမှန်ကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့တင်သမျှ Blog နည်းပညာတွေ အချိန်နှင့်တပြေးညီရနေမှာပါ။
Tech in Blogging
ညလေး အောင် says:
28 September 2014 at 18:44 Reply
အကို ကျွန်တော်ဆိုဒ်က အကိုပေးတဲ့ နည်းအတိုင်း ဒီလို You're about to add content from another site to your blog. Make sure you trust this site before proceeding. This action will place some code from the content provider into your blog page. You can view the code details below. ပေါ်နေတယ်။
Tech in Blogging ၏ Template အဟောင်း [ကြိုက်ရင်လာယူပါ]
jQuery Exit Pop-up Facebook Like Box Widget (Blogger only)
English-Myamar နှင့် Myanmar-English အဘိဓာန်ပါတဲ့ HARRIS.apk
Gtalk တွင် Zawgyi-One ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း [Ebook]
အပြာရောင် Blue up down button လေးပါ (Blogger only)
Author Boxes (1)
Blogger Tips (23)
Blogger Widgets (13)
PC Tricks and Tips (2)
Premium Link Generators (1)
Social Widgets (6)
Websites Information (9)
Image Icon Converter v.1.3 ကို crack လုပ်ကြရအောင်
Hide IP Easy 5.1.6.6 ကို crack လုပ်ရအောင်
သင့် Blogger site ရဲ့အောက်မှာ ကော်လန် ၃ခုခြားနည်း ...
Zip Password Tool 2.3 ကို crack လုပ်မယ်
Winzip 17 နှင့်ပတ်သတ်သော versionများ ကို full vers...
WinRAR 5(Beta 4) ကို Full verison ဖြစ်အောင် Crack ...
Smadav 2013 Rev.9.3 ကို Crack လုပ်မယ်
Adobe Photoshop CS3 ကို Crack လုပ်မယ် (Part-2)
Adobe Photoshop CS3 ကို Crack လုပ်မယ် (Extended မဟ...
Adobe Dreamweaver CS5 ကို Crack လုပ်မယ်
Facebook Profile နှင့် Page ရဲ့ ID ကိုရှာဖွေရအောင်...
သင့် Blogger site ကို မြန်ဆန်စေမယ့်နည်းလမ်းများ (အ...
ဆိုဒ်အတွက် Color ကုဒ်ယူရန် (Blogger only)
Tech in Blogging ရဲ့ပိုစ့်အားလုံးကို Android ဖုန်း...
Authentication Required ဆိုတဲ့ pop-up box ဖြုတ်နည်...
သင့်Blog ဖွင့်တိုင်း Adult content စာမျက်နှာကြီးမလ...
Mobile တွင် Post တစ်ခုတင်နည်း (Blogger only)
၀င်လို့မရတဲ့ Blogger ဆိုဒ် တွေကိုကျော်မယ်ခွမယ်
Zawgyi <=> Unicode ပြောင်းတဲ့ floating အရောင်စုံ B...
သင့်၏ Blogger site တွင် Malware ရှိ/မရှိစစ်ဆေးနည်း...
Google+ commenting system ရဲ့ အကောင်းနှင့်အဆိုး
Template ကိုသွားပြင်မယ်ဆိုရင် error မဖြစ်လေအောင် [...
Facebook Page တစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဖန်ဆီးတည်ဆောက်ခြင်း
Tech in Blogging မှ Website ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည်...
Gtalk တွင် Zawgyi-One ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း=======================http://bit.ly/13GVVk1=======================
သင့်၏ Android ဖုန်းအတွက်
အောက်က အစိမ်းရောင်နဲ့ ကုဒ်ကို Barcode Scanner (သို့မဟုတ်) QR Code Scanner တို့ဖြင့်ဖတ်ပြီး ဒေါင်းလုတ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
Tech in Blogging's Editor
Howdy! This is YGNBlogger and the founder of Tech in Blogging. I am 9th grade student. I'm now 15 years old...More
Find more crack softwares
Copyright © 2011 Tech in Blogging | Powered by Blogger
Design by Tech in Blogging